Ukuzibekela Usukelo Lokukhonza UThixo: “Wugudise Umkhondo Wonyawo Lwakho” Ukuze Utyhalele Phambili | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
XA ABANTU bakaThixo babeshiya iBhabhiloni ngo-537 B.C.E., uYehova wayefuna ukuqinisekisa ukuba bayafika eYerusalem. Wathi kubo: “Hlahlani indlela yabantu. Fumbani, fumbani uhola wendlela. Susani amatye kuyo.” (Isa. 62:10) Cinga nje ngendlela abamele ukuba bakwenza ngayo oku. Abo babehamba phambili basenokuba balungisa indlela, bevala imijelo ngoxa besusa imiqobo. Oku kwakuza kunceda abazalwana babo ababelandela emva kwabo.
Ngendlela efanayo, silandela indlela ethile xa sikhonza uYehova. UYehova ufuna bonke abakhonzi bakhe bahambe kuloo ndlela ngaphandle kweziphazamiso. ILizwi lakhe lithi: “Wugudise umkhondo wonyawo lwakho, yaye ngamana zonke iindlela zakho zingamiselwa ngokuqinileyo.” (IMize. 4:26) Enoba uselula okanye akunjalo, kuya kukunceda ukuthobela eli cebiso livela kuThixo.
Mhlawumbi ukhe weva abantu bethetha ngomntu oselula besithi: ‘Lo mntwana, uya kunqandwa ngamafu.’ Ngokuqhelekileyo abantu abaselula baphile qete, banengqondo ekhawulezayo ibe bazimisele ukuphumelela ebomini. IBhayibhile inyanisile xa isithi: “Ubuhle babafana ngamandla abo.” (IMize. 20:29) Umntu oselula osebenzisa iziphiwo namandla akhe ukukhonza uYehova unokuphumelela aze onwabe ngokwenene.
Noko ke, njengokuba usazi, ihlabathi liwafuna shushu amandla olutsha lwethu. Xa iNgqina eliselula liqhuba kakuhle esikolweni, ootitshala okanye oontanga banokulicebisa ukuba lifune imfundo ephakamileyo ukuze liphumelele kule nkqubo yezinto. Elinye lisenokuba yincutshe kwezemidlalo, baze abaququzeleli balirhwebeshele ekubeni ngumdlali odumileyo. Ngaba wakha wakuloo meko, okanye kukho umntu omaziyo oye wajongana naloo mpembelelo? Yintoni enokunceda umKristu enze ukhetho lobulumko?
Iimfundiso zeBhayibhile zinokumnceda umKristu alungele ukuhamba ngeyona ndlela imnandi ebomini. INtshumayeli 12:1 ithi: “Khumbula uMdali wakho Ozukileyo ngemihla yobufana bakho.” Unokumkhumbula njani uMdali wakho Ozukileyo, okanye unokumnceda njani umhlobo oselula ukuba enjenjalo?
Khawucinge ngento eyenzeka kuEric * waseNtshona Afrika. Wayekuthanda ukudlala ibhola. Xa uEric wayeneminyaka eyi-15, wayesele ekhethelwe ukudlala kwiqela lelizwe lakhe. Loo nto yayithetha ukuba kungekudala, wayenokuqeqeshwa eYurophu, aze abe ngumdlali webhola odumileyo. Kodwa laliza kumnceda njani icebiso elithi “khumbula uMdali wakho Ozukileyo”? Ziziphi izinto onokuzifunda wena okanye umhlobo wakho kula mava?
Xa wayesesesikolweni, uEric wafunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova. Oku kwamnceda wafunda ukuba uMdali wakhe uza kuziphelisa nya iingxaki zabantu. UEric watsho wabona indlela ekubaluleke ngayo ukusebenzisa ixesha namandla akhe ekwenzeni ukuthanda kukaThixo. Ngenxa yoku, uEric wakhetha ukungachithi amandla akhe ekudlaleni ibhola. Kunoko, wabhaptizwa waza wazimisela ekukhonzeni uThixo. Ethubeni, waba sisicaka solungiselelo waza wabizwa kwiSikolo SeBhayibhile Sabazalwana Abangatshatanga.
Ukuba wayethe phithi kukudlala ibhola, uEric wayesenokuba sisityebi aze adume. Kodwa wakubona ukunyanisa komgaqo weBhayibhile othi: “Izinto zexabiso zesityebi ziyidolophu yaso eyomeleleyo, yaye zinjengodonga olukhuselayo kwingcamango yaso.” (IMize. 18:11) Kukuphupha emini ukucinga ukuba ubutyebi bunokumkhusela umntu. Ngaphezu koko, abantu abaleqa ubutyebi badla ‘ngokuzingxwelerha ngeentlungu ezininzi.’—1 Tim. 6:9, 10.
Okuvuyisayo kukuba, ulutsha oluninzi luye lwafumana ulonwabo nonqabiseko lokwenene kwinkonzo yexesha elizeleyo. UEric uthi: “Ngoku ndikhethe ukuba ‘kwiqela’ elikhulu labantu abakwinkonzo yexesha elizeleyo. Alikho elinye iqela elidlula eli, ibe ndimbulela gqitha uYehova kuba eye wandibonisa indlela yokufumana ulonwabo nempumelelo yokwenene ebomini.”
Kuthekani ngawe? Kunokusukela impumelelo kweli hlabathi, kutheni ungalungisi “iindlela zakho” phambi koYehova ngokuba nguvulindlela?—Funda ibhokisi ethi “ Ukufumana Iingenelo Ezingenakufunyanwa Eyunivesithi.”
UKUSUSA IMIQOBO ENDLELENI YAKHO
Xa esinye isibini sasityelele kwiBheteli yaseUnited States, sabona indlela abonwabe ngayo abantu abakhonza uYehova apho. Kamva udade wabhala wathi: “Sasisele siyiqhele kakhulu indlela esasiphila ngayo.” Esi sibini sagqiba ekubeni sisebenzise ixesha namandla aso ngakumbi ekukhonzeni uYehova.
Ngaxa lithile, kwakubonakala kunzima kwesi sibini ukwenza utshintsho olufunekayo. Kodwa ngenye imini, sacamngca ngetekisi yosuku. YayikuYohane 8:31, apho uYesu athi: “Ukuba nithe nahlala kulo izwi lam, ngokwenene ningabafundi bam.” Sicinga ngaloo mazwi, sazixelela oku: “Nantoni na esiyincamayo ebomini asiyincameli lize.” Sathengisa ipomakazi laso nezinto ezingeyomfuneko, saza safudukela kwibandla elifuna uncedo. Ngoku singoovulindlela, ibe sincedisa ekwakhiweni kweeHolo zoBukumkani nakumalungiselelo eendibano zesithili. Sivakalelwa njani ngoku ngobomi baso? Sithi: “Iyasimangalisa indlela esonwabe ngayo njengokuba siphila ubomi obulula, sisenza kanye le nto ikhuthazwa yintlangano kaYehova.”
QHUBEKA UTYHALELA PHAMBILI
USolomon wathi: “Amehlo akho, afanele akhangele ngqo phambili, ewe, amehlo akho aqaqambileyo afanele athi ntsho phambi kwakho.” (IMize. 4:25) Njengokuba umntu oqhubayo enikela ingqalelo endleleni, simele siphephe naziphi na izinto ezinokusiphazamisa ekuzibekeleni usukelo lokukhonza uYehova size siluphumeze.
Luluphi usukelo onokuzibekela lona uze uluphumeze? Usenokukhetha ukuba kwinkonzo yexesha elizeleyo. Usenokuya kwibandla elikufutshane elifuna abavakalisi abaza kuncedisa kwintsimi yalo enkulu. Okanye ibandla lisenokuba nabo abavakalisi, kodwa lingabi nabo abadala nezicaka zolungiselelo ezaneleyo. Ngaba unokuba luncedo ngenye yezi ndlela? Kutheni ungathethi nomveleli ohambahambayo ukuze ubone enoba unokuncedisa kusini na? Ukuba ukulungele ukuncedisa amabandla akude, unokukhangela amabandla afuna uncedo. *
Makhe sibuyele koko kuchazwe kuIsaya 62:10. Kusenokwenzeka ukuba wambi amaYuda asebenza nzima elungisa indlela ukuze abantu bakaThixo baye kufika eYerusalem. Ukuba uzimisele ukuphumeza usukelo lwakho lokukhonza uThixo, unganikezeli. UThixo unokukunceda uluphumeze. Qhubeka umcela uYehova akunike ubulumko ukuze ususe nayiphi na imiqobo enokuvela. Ethubeni, uya kutsho uyibone indlela anokukunceda ngayo ‘uwugudise umkhondo wonyawo lwakho.’—IMize. 4:26.
^ isiqe. 18 Funda incwadi ethi Ukwenza Ukuthanda KukaYehova Ngolungelelwano, iphepha 111-112.
Ukufumana Iingenelo Ezingenakufunyanwa Eyunivesithi
XA UFLAVIA wayesemncinane, uninakhulu owayeliNgqina likaYehova, wancokola naye ngeBhayibhile. Noko ke, uyise wayengutitshala, ibe wabethelela kuye umnqweno wokufunda ngendalo nokuya eyunivesithi. Abantu babedla ngokuthi kuye, “Esi sizukulwana senu sinokuyihlangula le planethi.” Exhaswa nguyise, waya kwiyunivesithi eyaziwayo, apho waqalisa ukuphanda ngeendlela zokuvelisa ipetroli engazi kungcolisa umhlaba.
UFlavia wakhawuleza wabona ukuba abafundi abaninzi abanamdla ‘wakuhlangula planethi.’ Kwakhona, ezinye izifundo kule yunivesithi zazixhomekeke kwinkxaso yoosomashishini, ngoko abaphandi babedla ngokwenza izinto eziza kukholisa loo mashishini. Le nto yayimkhathaza uFlavia. Xa amaNgqina kaYehova ankqonkqoza kwakhe, umdla awayenawo kwinto ethethwa yiBhayibhile ngoThixo nangekamva wavuseleleka.
UFlavia wayamkela inyaniso yeBhayibhile waza wabhaptizwa. Kodwa ngenxa yezifundo awayezikhethile, wayengenaxesha laneleyo lokushumayela. Ngenye imini, wayephulaphule omnye umveleli wesiphaluka exubusha uYakobi 4:17 othi: “Ukuba ubani uyakwazi ukwenza okulungileyo kodwa angakwenzi, kusisono oko kuye.” La mazwi amenza wacinga ngeyakhe imeko. Uthi: “Ndandiyifuna intsikelelo kaYehova, ndabe ngapha ndifuna nokuba ngusosayensi ophumeleleyo. Kwanyanzeleka ndikhethe.”
UFlavia wagqiba kwelokuba ayeke eyunivesithi. Ngaba uyazisola ngesi sigqibo? Uthi:
“Ukukhonza uYehova kundincede ndafumana iingenelo ebendingenakuzifumana eyunivesithi. UYehova undincede nyhani. Undifundise ukuba nobubele, ukuthanda abantu nokubanceda. Ndonwabile emtshatweni wam ibe ndinethemba eliyidlula lee nantoni na ebendinokuyifumana kwisayensi. NguYehova kuphela onokuhlangula le planethi. Soze ndimshiye.” UFlavia nomyeni wakhe bakhonza kwikomkhulu lamaNgqina kaYehova eNew York.